China Sheet mando sy maina manosotra famolavolana taratasy fametahana takelaka sy mpamatsy | Xieyanshi
Takelaka famolavolana taratasy fanosotra lena sy maina
9 '' * 11 '' Takelaka famolavolana taratasy fanosotra lena sy maina
Size 9 "x 11" / 230mm * 280mm
Fanohanana taratasy Taratasy farany
Color Fotsy / manga
Grain masiaka Oxygène aluminium
Applications: Hazo hosodoko vita amin'ny hazoSteelInôksa
toetra mampiavaka: Taratasy latina avo lenta nohafarana Mahay manovaova, mivalona tsara ary mahatohitra ny fanoherana. Ny velarana mifono dia fitsaboana manokana- manohitra ny bakoka, miantoka ny fahombiazan'ny fanesorana avo kokoa.Resina avo lenta, manome voamadinika sy taratasy ifotony matanjaka kokoa.Fotoana fampiasana lava kokoa
Metaly toy ny alimo, vy vy; indrindra ho an'ny hazo toy ny kitay na hazo mafy ... Ny lambam-pandriana B322 dia afaka miara-miasa amin'ny sander amin'ny asa vita sasany, toy ny fanamboarana / fanamboarana, ny fipetrahana orbital, ny fanamboarana vy alohan'ny hoso-doko.
Ny taratasy famaohana fotsy B322 dia mampifanaraka ny mineraly oksida aluminium avo lenta, izay maharitra, ary miantoka ny fanapahana haingana.
Ny palitao dia fananganana palitao misokatra, satria misy elanelana eo anelanelan'ny voamadinika mahasalama, fisorohana ny fanakanana vovoka, izay mety hanitatra ny fiainana mandratra be.
Ny takelaka fanosorana B322 dia tena mora ampiasaina ary apetaka amin'ny sanders, sanding block, sns.
Ny taratasy fanamoriana fotsy fotsy dia misy amin'ny metaly izay tsy mora ampiasaina halain'ny. Lazao, totoina ny vy tsy misy fangarony, firaka aliminioma mafy, taratasy famaohana fotsy safidy tsara kokoa. Noho ny antony vidiny, mpanjifa sasany misafidy alimina ho an'ny vy izay mora kosehina, hoy ny vy, ny alimo firaka.
Taratasy fotsy fipetrahana fotsy, mety amin'ny fehikibo mahery vaika vy fanodinana. Safidy tsara ho an'ny volo vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny hairlines dia mazava sy mifanaraka tsara.
Previous: XYS Agence polishing milina matihanina-CY0818
Manaraka: XYS maimaim-poana vovoka finday maina (Standard)